ukwakhiwa nokulungiswa | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: ukwakhiwa nokulungiswa
Ngaba kunokwenzeka ukuphosa inkunkuma yokwakha kwiibhotile?
Ngaba kunokwenzeka ukulahla inkunkuma yolwakhiwo kwizikhongozeli? Kwaye kutheni kukho iintlobo ezizodwa zemizimba yeelori zokulahla kufutshane? hayi eyenkunkuma yokwakha, eh? Kwaye inkunkuma yokutya ilahlwa yodwa ...
Unokwenza ntoni ngentsalela yokugqiba (iphepha lodonga, iithayile, iipaneli, ...) emva kokulungiswa?
Unokwenza ntoni ngentsalela yokugqiba (iphepha lodonga, iithayile, iipaneli, ...) emva kokulungiswa? Ngokwesiqhelo azisetyenziswa nangayiphi na indlela, kodwa zigcinwa kwimeko yokonakaliswa kokuhonjiswa okugqityiweyo. Umzekelo, uneetayile ezimbalwa ezishiyekileyo, ...
Yiyiphi i-niche eludongeni lombhede?
Indlela yokudweba indlu kwi-3D?
Uzoba njani indlu kwi3D? Oku kufuneka kwenziwe yingcali. 2.Ukuba ufuna ukuzenzela yonke into ngokwakho, jonga kwinqaku le-1. Ungawanyanga ngokwakho amazinyo akho, kodwa ngesizathu esithile wonke umntu ubalekela ...
Ziziphi iimpawu zesamente? Amagqabi?
Zeziphi analogue zesamente? Abo babambeleyo? Indawo yesamente - ukwakha i-gypsum (alabaster), isamente yemagnesia, iglasi yamanzi, ngokubopha ngokubanzi. Ezi zinto zisetyenziselwa ukwenziwa kwezinto zokwakha: imixube ekhethekileyo yokwakha (ii-putties, iiplasta), i-drywall, ...
Ungajonga njani umgangatho wezakhiwo ezintsha?
Ungajonga njani umgangatho wesakhiwo esitsha? Ewe awunakubachaza nangayiphi na indlela, ukuba awuyongcali, ziyafihlwa. Ukuba kunjalo, baya kuphuma kancinci kancinci, mhlawumbi hayi ...
Ungakhetha njani u-windows?
Uyikhetha njani i-Euro eyiyo windows? Iifestile ze-Euro zinokuba ngamaplanga, i-aluminium kunye neplastiki, ezi zezona zininzi.Khetha nje iprofayile yeplastiki apho iifestile zenziwe kwiinkampani ezaziwayo, azikho kangako.Le yiphrofayili yaseKorea ye-LG Chem (enqabileyo, kodwa, kum ...
Indlela yokukhipha amanzi kwi-bhotile yamanzi?
Ukucoca amanzi njani kwibhoyila yeatlantic? Amanzi kufuneka akhutshwe kwibhoyila ebandayo. Sivalela impompo yamanzi abandayo phambi kwebhoyila. Sivula itephu eshushu kubaxube, xa amanzi edreyina, siyivale itephu. Siyikrole ivelufa, ...
Indlela yokufunda ukulungisa ikhompyutha yakho?
Ufunda njani ukulungisa ikhompyuter ngokwakho? Kukulungele ukwenza ubuhlobo nomntu onolwazi kwaye ngokuthe ngcembe ungene nzulu kubuqhinga. Kuqala kufuneka ufunde ukusombulula ingxaki kwiibhloko ezizezinye. Ke, ukuba unolwazi (okanye ...
Ngaba kunokwenzeka ukubeka i-laminate kwi-flooring endala?
Ngaba i-laminate flooring ingabekwa phezu kweparquet endala? Ingabekwa ngaphezulu kwendala ukuba akukho ukudumba, ukufuma okanye ukungunda. I-Laminate ingabekwa, kodwa ukuba iparquet igcinwe kakuhle, akukho mehluko wobude, ke ...
Yintoni eqinisekisiweyo okanye isihlunu?
Yintoni engcono okanye ujije ngokwakho? Molo mbhali othandekayo wombhali. Masiqale ngento yokuba kukho izikrufu kuphela kwiifoto ozihambisileyo. Akukho siqinisekiso apho. Isiqinisekiso sijongeka ngoluhlobo. Ngoku buyela ku ...
Yintoni ifestile engaboniyo?
Yintoni ifestile engaboniyo? Ifestile yiglasi enefestile, ukuvula eludongeni, ukukhanya kunye nokungenisa umoya kwigumbi.
Uthini umahluko phakathi kwe-welding kunye ne-soldering?
Nguwuphi umahluko phakathi kwentsimbi kunye nokuhombisa? Ukunyibilikisa kukudityaniswa kwamacandelo ngokufudumeza indibaniselwano kwiqondo lobushushu lesinyithi, kulandele ukwaziswa kwezinto zokugcwalisa kwindawo ye-weld, nayo eshushu ...
Yintoni ongayibetha imihla ngemihla ye-2 ngonyaka?
Ziyiphi ukufundwa kokuqala kwemitha yamanzi xa uthenga?
Kukuthini ukufundwa kokuqala kwemitha yamanzi xa kuthengwa? Sukuba nexhala ngale nto. Ubungqina buya kungenwa kwikhontrakthi yinkosi eya kufaka itywina. Ukongeza, unokuba nayo yonke into ngokweenkcukacha ...
Ngaba umntu osebenza kwiindawo zokwakha unjengekhoboka?
Ngaba umntu osebenza kwiindawo zokwakha unjengekhoboka? Ikhoboka kunye nomsebenzi bahluke ngokupheleleyo. Ikhoboka alifumani mvuzo, lisebenzela inyani yokuba liyondliwa. Umsebenzi ufumana umvuzo athi ...
Indlela yokuhlela umculi wendawo yomsebenzi ekhaya?
Uyicwangcisa njani indawo yokusebenzela yegcisa ekhaya? Usebenza nantoni? Ukuba ioyile .. emva koko uthenge incwadi yokubhala. Yonke into oyifunayo ingena kuyo. Ukuba umsebenzi awumkhulu kakhulu, incwadi yesketshi inokusetyenziswa ...
Nguwuphi umbala i-asphalt: mnyama okanye ngwevu - ngoba?
Nguwuphi umbala i-asphalt: mnyama okanye ngwevu - ngoba? I-Asphalt inelitye elityumkileyo okanye igrabile, isanti kunye nebhitumene. Ibhitumini ihlala imnyama okanye imdaka ngombala, ke ithiyori i-asphalt kufuneka ibe mnyama ...
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,903.